नौ महिनापछि खुलेको मोटरसाइकलको लाइसेन्सको कुपन लिन हजारौं लाइनमा . - KlipMandu
नौ महिनापछि खुलेको मोटरसाइकलको लाइसेन्सको कुपन लिन हजारौं लाइनमा .
October 30, 2017 October 30, 2017 klipmandu0Comments
यातायात व्यवस्था कार्यालय कोशीको इटहरीस्थित कार्यालयमा मोटरसाइकलको लाइसेन्सका लागि फारम भर्न कुपन लिने क्रममा प्रहरीको लाठी चार्जबाट तीन घाइते भएका छन् । कुपन दिने झ्यालसम्म पुग्न लाग्दा धेरै नै ठेलमठेल भएपछि प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको थियो । लाठी प्रहारबाट बुढीगंगा गाउपालिका–१ का टिकाराम निरौलाको टाउको चोट लागेको छ । उनीसंगै दुईजना थप घाइते भए । प्रहरीले नै इटहरीस्थित एपेक्स हस्पिटलमा निरांलाको उपचार गरेको छ ।मध्यरात देखी नै सर्वसाधरणको लाइन यातायात कार्यालयमा लागेको थियो । बरगाछीदेखी लागेको सेवाग्राहीको लाइन तीन किलोमिटर दक्षिण आर्मी क्याम्पसम्म आइपुगेपछि व्यावस्थापन गर्न समस्या भएको थियो ।
नौं महिना पछि मोटरसाइकलको चालक अनुमपति पत्रको लागि आज फारम खुलेको हो ।
एकै पटक दशौं हजारले चालक अनुमति पत्रको फारम भर्नका लागि कुपन लिन जम्मा भएपछि प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयलाई भिड नियन्त्रण गर्न र चालक अनुमपति पत्रको लागि कुपन वितरण गर्न समस्या भएको हो ।मध्यरातबाट नै लाइन सुरु भएपछि त्यसलाई व्यवास्थित बनाउन प्रहरी र ट्राफिकले तत्काल कार्य नथाल्दा समस्या भएको लाइन बस्नेहरु बताउँछन् । राति १ बजे देखी लाइनमा बसेर पनि कुपन नपाएका विराटनगरका प्रेम कार्कीले बताए । यातायात व्यवास्था कार्यालय, नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले लाइनलाई राम्रो ब्यवास्थापन गर्न नसक्दा समस्या भएको कार्कीले बताए ।यातायात कार्यालयका प्रमुख श्यामकुमार सिंह पहिले फारम वितरण गर्दा र लिदा निकै भिड भएकाले अहिले कुपन पद्धतीबाट भिड कम गर्न खोजीएपनि भिड उत्ति नै भएकाले व्यवास्थापनमा कठिनाइ भएको बताए । यो पटक डिजिटल फारम भर्ने प्रणाली आएकाले पहिले कुपन वितरण गरेर कुपनमा भएको मितिमा सेवाग्राहीको डिजिटल सिस्टमबाट सोझै कम्प्यूटरमा फारम भरिन्छ । त्यसपछि मात्र उनीहरुलाई दिइएको मितिमा लिखित र प्रयोगात्मक परिक्षा संचालन हुन्छ । कुपन लिन एकै दिन भिड लागेकाले ब्यावस्थापन गर्न केही कठिनाइ भएपनि भोलीदेखी समस्या नहुने उनले बताए ।
← ८८ केजी सुन तस्करी ‘सशस्त्रकै मिलेमतोमा’
Vacancy Announcement at UN Women Nepal →
Vacancy Announcement at UN Women Nepal
October 30, 2017 klipmandu 0
October 25, 2017 klipmandu 0